Ini Ndinoomesa Kudzoreredza Sei iPhone XS & iPhone XS Max? Iyo Kugadzirisa! - Iphone
iphone 4s wifi yakachekerwa gadzira
mamwe masevhisi eakaunzi haazowanikwi kudzamara mapinda zvakare
foni inoratidza mahedhifoni akabatana kana zvisiri
Ini Ndinoomesa Kudzoreredza Sei iPhone XS & iPhone XS Max? Iyo Kugadzirisa!
Iwe uchangobva kuwana yako nyowani iPhone XS kana XS Max, asi ikozvino yave chando! Iwe unofanirwa kuitangisa, asi iwe hauna chokwadi kuti sei. Muchikamu chino, ndichakuratidza maitiro ekuomesa zvakaoma iPhone XS uye iPhone XS Max .
Maitiro Ekumisikidza Zvakaoma An iPhone XS & iPhone XS Max
Kurumidza kudzvanya uye kusunungura iyo vhoriyamu kumusoro bhatani .
Kurumidza kudzvanya uye kusunungura iyo vhoriyamu pasi bhatani .
Dhinda uye ubatisise bhatani repadivi .
Sunungura bhatani repadivi apo Apple logo inoonekwa pachiratidziri. Izvi zvinogona kutora masekondi 20-30 mune dzimwe nguva.
Yako iPhone XS kana XS Max inozodzoka shure chinguva Apple logo ichipenya pachiratidziri!
Zvakaipa Here Kuomesa Reset Yangu iPhone XS Kana XS Max?
Kugadziridza kwakaomarara igadziriso yenguva pfupi kana yako iPhone yaita chando, yakanamatira paApple logo, kana kunamira pane dema skrini. Kugadziridza kwakaomarara kunodzosera yako iPhone kure uye kumashure nekukasira, inova yekugadzirisa nekukurumidza kune aya akajairwa software matambudziko.
Nekudaro, kune vaviri matambudziko neyakaomarara reset. Chekutanga, kuomarara kwakaoma hakunyatso kugadzirisa zviri pasi pasoftware nyaya dziri kutonhora yako iPhones kuratidza. Matambudziko iwayo achiripo uye anowanzo kurima kumusoro zvakare kana zvese zvaunoita zvakaoma itangezve yako iPhone. Tinokurudzira kuisa yako iPhone muDFU modhi kugadzirisa zvakadzama software matambudziko!
Iwe zvakare unomhanya nengozi yekukanganisa mafaera esoftware kana iwe ukaomesa reset yako iPhone. Kusiyana neyakareruka reset (kudzima yako iPhone kudzima uye kumashure), zvirongwa, mashandiro, uye kunyorera hazvivharwe zvakasununguka kana iwe ukaomesa kuseta yako iPhone.
Heino tsika yenyaya: chete zvakaoma gadziridza yako iPhone kana iwe uchifanira zvachose. Nguva dzose edza zvakapfava kumisazve yako iPhone usati washandisa kune yakaoma reset. Zvakaoma kuseta hazvinyatso kugadzirisa matambudziko e-software pane yako iPhone, saka ungangoda kuenda nhanho kumberi uye gadziridza zvese marongero kana DFU kudzorera yako iPhone.
Izvo Zvakanga Zvisinganyanye Kuoma!
Iwe vakabudirira zvakaoma itangezve iPhone wako uye zviri kushanda zvakajairika zvakare! Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media nevemhuri yako neshamwari kuti iwe ugone kuvadzidzisa maitiro ekuomesa kuseta iyo iPhone XS kana iPhone XS Max. Une chero mimwe mibvunzo nezve idzi nyowani iPhones? Vasiye ivo muchikamu chemashoko pazasi!